Puntland:- Majirto Ciidamo laga qoray Mudug oo ay leedahay Dowladda Soomaaliya – Somali Top News
November 9, 2019 Somali Top News	0 Comments Puntland:- Majirto Ciidamo laga qoray Mudug oo ay leedahay Dowladda Soomaaliya
Maamulka Puntland ayaa beeniyay warar lagu faafiyay baraha bulshada oo sheegayay in dowladda Federaalka Soomaaliya ay ciidamo ka qoratay degaanno ka tirsan gobolkaasi Mudug.
Guddoomiyaha Gobolka Mudug ee dhanka Puntland Axmed Muuse Nuur ayaa sheegay in warkaasi ay faafiyeen dad lacag ka raadinaya Dowladda Faderaalka Soomaaliya, balse sida uu sheegay ay ku fashilmeen, maadaama aysan soo bandhigin ciidan iyo hub la wareejiyay midna sida uu hadlka u dhigay.
“Waxaasi wax jira maaha ciidana lagama qoran gobolka Mudug, colaad Federaal iyo Federaal ku soo duulayna ma jiro” ayuu yiri guddoomiyaha gobolka Mudug.
Wuxuu intaasi raaciyay in aysan jirin wax xiriir ah oo ka dhexeeya maamulka gobolka Mudug ee Puntland iyo xukuumadda Federaalka Soomaaliya, isagoo caddeeyay in wixii heer Federaal ee looga baahdo gobolka Mudug ay tahay in loo soo maro Madaxtooyada Puntland.
“Annaga heer gobol xiriir lama lihin dowladda Federaalka ah, xiriir waxaan la leenahay dowladda aan ka tirsanahay, xiriirka Federaalkana waxaa leh xukuumadda sare ee ilaa heer madaxweyne ah” ayuu hadalkiisa Raaciyay.
Dhinaca kale, dowladda Federaalka ayuu ku eedeeyay in aysan aaminsaneyn nidaamka Federaalka ee lagu doortay, taasi beddelkeedana ay door-bidayso in dalka loo maamulo nidaam tuulo-tuulo iyo degmo-degmo ah sida uu sheegay.
Wararkaan ayaa daba socda warar Maalmihii la soo dhaafay lagu baahiyay Baraha Bulshada oo sheegayay in dowlada Soomaaliya ay deegaano ka tirsan Gobolka Mudug ee dhanka Puntland ay Ciidamo ka qoratay.
← Doodo waaweyn oo ka dhashay sifo uu ku sheegay madaxdii dalka kaga horreysay Ra’isul Wasaare Kheyre?
Southwest state leader tours flood affected Bardale district →
Warar hor dhac ah oo laga helayo qarax ismiidaamin ah oo ka dhacay Garoowe
March 29, 2020 March 29, 2020 Somali Top News 0
Muqdisho oo lagu qabtay xubno katirsan Daacish